Sawirro badan oo kooxo ah oo loogu talagalay Taxanaha Apple Watch 7. Markan 41mm | Waxaan ka imid mac
Sawirro badan oo kooxo ah oo loogu talagalay Taxanaha Apple Watch 7. Markan 41mm
Waxay umuuqataa shabakadda sawir cusub oo ah waxa Apple's Apple Watch Series 7 xargaha ay noqon karto. Xaaladdan oo kale, macluumaadka la daabacay dhowr saacadood ka hor ayaa wax yar la kordhiyay iyadoo leh suun maqaar ah 45 mm, hadda suun kale ayaa ka muuqda waxaad si cad u arki kartaa xardhintii 41mm.
Dhammaan wararka xanta ah waxay soo jeedinayaan in sannadkan aan arki doonno Apple Watch cusub oo naqshaddu wax ka beddeli doonto oo suumankana ay si uun noo siinayaan sabab. Ma aha sawir rasmi ah laakiin sawirradan ayaa soo daatay waqti ka hor inta aan la soo bandhigin qaabka cusub ee Taxanaha 7 aad bay muhiim u yihiin
DuanRui ayaa dhowr saacadood ka hor tusay sawirka suunkaan maqaar ee loogu talagalay Apple Watch inkasta oo uu si cad u sharraxay in sawirkan uusan ahayn kiisii, haddana wuxuu rumaysnaa inay dhab tahay. Hadda Majin Bu, oo aan u malaynayno inuu ahaa adeegsadaha u dhiibay sawirka DuanRui ayaa muujinaya sawir kale oo uu ku jiro suunka Solo Loop oo leh xardho 41mm ayaa si cad u muuqda. Waxaa kan ku xiga sawirka ay hore u soo daateen, kaas oo ah suunka maqaar ee 45mm oo loo malaynayo in loogu talagalay taxanaha Apple Watch 7.
Sidaa darteed waxay umuuqataa inaan ku yeelan doonno naqshad cusub Apple Watch -ka oo haddii daadku sii socdo heerkan kahor intaan si rasmi ah loo soo bandhigin waxaan ku arki doonnaa shabakadda. Sidii aan hore uga faaloonay, farqiga ugu weyni ma aha baaxadda shaashadda ee waa naqshaddiisa iyo Aynu rajaynno in xadhkaha ay adeegsadayaasha Apple Watch ka hor Taxanaha 7 hore u haysteen ay si buuxda ugu habboon yihiin saacadahaan cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple Watch » Sawirro badan oo kooxo ah oo loogu talagalay Taxanaha Apple Watch 7. Markan 41mm
Qaar ka mid ah waxyaabaha Hulu waxay la jaan qaadayaan Apple TV 4K